Maraykanka, 01 June 2016
Saameynta Islam Naceybka iyo Somalida Mareykanka
Muslimiinta ay Somalidu ka midka tahay ee ku nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesotta ayaa cabanaya falal jirnaceyb iyo Islam naceyb ah oo ay la kulmaan mararka qaar
Magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ku xiran ku dhowaad 45 dhallinaryo Soomaali ah oo dalkan kusoo galey si tahriib ah.
Minnesota: Dhageysiga Dacwadda 3 Wiil oo Weli Socota
Dhagaysiga dacwadda ka dhanka ah saddex dhalinyaro ah oo ku eedaysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish ayaa weli ka socota magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota
Hillary Clinton oo la Eedeeyay
Warbixin si qarsoodi ah looga helay baaraha guud ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa muujineysa in ay Hilliary Clinton iyo xog-hayayaal hore ay ku fashilmeen inay raacaaan tilmaamaha ku aaddan halisaha ammaan marka ay u isticmaalayaan email-ladooda gaarka ah qaab shaqo rasmi ahaaneed.
Rabshado Ka Dhacay Goob uu Ka Hadlayey Trump
Isu soo baxa taageerayaasha Donald Trump, oo ah musharaxa madaxweynaha Mareykanka, ayaa waxaa arbushay dibad-baxayaal carreysan oo soo jebiyey xeendaab.
Maxkamadeynta 3 Soomaali Ah oo Weli Ka Socota Minnesota
Magaalada Minneapolis waxaa wali ka socota dhageysiga dacwada loo heysto saddex will oo Soomaali-Mareykan ah, kuwaasoo lagu soo eedeeyey ina ay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda Daacish, dilalna ka geystaan meel ka baxsan Maraykanka.
Wareysi: Aabaha dhalay 2 Wiil oo Loo Heysto Argagixisnimo
Magaalada Minneapolis, waxaa weli ka socota dacwadda saddex dhalinyaro ah oo Soomaali oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS iyo inay falal dil ah ka gaysan rabeen dibedda waddankan kadib marka ay ka baxaan dalkan, eedahaasi oo ay beeninayaan.
War kooban oo qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Dowladda Mareykanka ay ka walaacsantahay dib u dhacyo ka jira hanaanka doorashada Somalia ee 2016ka.
Mareykanka: Nin Qirtay Inuu Gubay Maqaayadda Jubba
Mathew William Gust, ayaa ka hor qirtay maxkamad ku taalla gobolka North Dakota ee dalka Mareykanka in uu gubey maqaayadda Jubba Café oo ay lahaayeen dad Soomaaliyeed, islamarkaasina ku ku taallay magaalada Grand Forks ee isla gobolkaasi, 8-dii bishii Diseembar ee sanadkii hore.
Trump oo Diyaar u ah in uu la Hadlo Kim Jong Un
Musharaxa madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo hoggaamiyaha Korea-da Woqooyi Kim Jong Un, si uu isugu dayo hakinta barnaamijka Nuclear-ka dalkaas.